C++ နဲ့ TCP/IP Chat — MYSTERY ZILLION
C++ နဲ့ TCP/IP Chat
February 2014 edited February 2014 in C++
C++ နဲ့ TCP/IP Chat software လေးရေးချင်လို့ပါ
Visual C++ နဲ့မဟုတပြါဘူး C++ မှာ SOCKET ကိုသုံးပှီး
TCP/IP Chat software လေးရေးချင်လို့ပါ
You can learn from opensource project. Check https://github.com/search?l=C++&amp;q=socket+chat&amp;ref=cmdform&amp;type=Repositories
If you want to read about socket in C++ , http://beej.us/guide/bgnet/output/html/singlepage/bgnet.html can help you
Windows ပေါ်မှာဆို Socket က VC မသုံးပဲနဲ့မရဘူး ဘာလို့ဆိုတော့ Library က winsock သုံးရမှာ မရရအောင် Cygwin သုံးရင်ရတယ် ဒါပေမယ့် စပြီးတော့ လေ့လာတဲ့လူအတွက် အဲလောက် ရှုပ်အောင်မလုပ်တာ ကောင်းပါတယ် Windows သုံးရင်တော့ winsock သုံးပေါ့ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ Linux ပေါ်မှာကတော့ Socket တွေကပိုလွယ်ပါလိမ့်မယ်။
Cygwin နဲ့ဘယ်လိုသံုးရတာလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါလား ...
Cygwin က Unix-like environment ကို Windows ပေါ်မှာသုံးလို့ရအောင် လုပ်ပေးထားတာ တကယ်ကတော့ Cygwin သုံးပြီး Socket ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲတော့ မရှိပါဘူး Linux ပေါ်မှာ Build လုပ်တဲ့ အတိုင်းကို Cygwin ထဲမှာ Build လုပ်ရင်ရပါလိမ့်မယ်။ http://www.cygwin.com ကနေ Download လုပ်ပြီးတော့ Install လုပ်ရင်ရတယ်။ အောက်မှာပြထားတဲ့ Links တွေကနေ ဖတ်ပြီးတော့ Socket ကိုစမ်းကြည့်လို့ရတယ်။
Cygwin ကိုအကြံမပေးတာက Beginner ဖြစ်နေလို့ပါ Build လုပ်ဖို့လိုမယ့် Dependency တွေ Install လုပ်တာတွေ အမျိုးမျိုးပြဿနာ တက်လာရင် ရွာလည်နေပါလိမ့်မယ်။ နောက်တခုက Linux/BSD နဲ့လုပ်ရင်တော့ စမ်းကြည့်ရင်းနဲ့ အဆင်မပြေတာရှိရင် ကျွန်တော်က အကြံပေးလို့ရနိုင်တယ် Windows မရှိတော့ Cygwin နဲ့လည်း ကြည့်ပေးလို့မရပါဘူး။
Thanked by 1 Pro
Cygwin install လုပ်ပြီးပါပြီ ဒါပေမဲ့ gcc ပါမလာဘူးဖြစ်နေတယ်
@Pro , did you chose gcc package when install ?
You need to have internet and run again the Cygwin installer.
You can choose the packages that you wanted to install.
Cygwin is not C++ compiler, it's Unix-like simulated environment.
You will need to install the required packages according to your requirements.